Paramende Youdzwa Kuti Hurumende Haisi Kukoshesa Mishonga yeChivanhu
Hurumende yeZimbabwe inonzi haisi kukoshesa varapi vechivanhu pamwe nemishonga yavo sezvo isiri kupa rutsigiro rwakasimba kubazi kuvarapi kunyange hazvo paine humbowo hunoratidza kuti zvikamu masere kubva muzana zvevanhu vemuZimbabwe zvinoenda kun’anga kana kushandisa mushonga yechivanhu pane dzimwe nguva.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organisation yakaratidzawo kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vane hutachiwana hweHIV/AIDS pamwe nezvikamu makumi mashanu nezviviri zvemadzimai akazvitakura vanoshandisawo mishonga yechivanhu.
Vachipa humbowo nemaererano nemabasa ari kuitwa nehurumende kusimudzira mabasa evarapi vemuno pamwe nemishonga yavo, munyori mukuru mubazi rezvehutano, Doctor Gerald Gwinji, vaudza komiti yeparamende inoona nezvehutano kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vachishandisa mishonga iyi, hurumende hasi kuvapa mari yavanoda kusimudzira kushandiswa kwemishona iyi.
Doctor Gwinji vati bazi ravo rine chikamu chinoona nezvemishonga iyi asi chikamu ichi hachiwani mari yachinoda.
Semuenzaniso, Doctor Gwinji vati gore rega rega, chikamu ichi chinoda zviuru mazana matanhatu zvemadhora nechidumbu asi chinowanzo pihwa churu chemadhora chete izvo zvinoita kuti chitadze kuita basa racho.
Vanoti kunze kwekushaya mari vane zvakawanda zvavari kuita zvekuona kuti mabasa evarapi vemuno pamwe nemishonga yavo yasimudzirwa.
Vati mutemo we Traditional Medical Practitioners Act 11, Regulations on Complementary and the Traditional Medicine policy ndezvimwe zvavakaitwa kusimudzira mabasa evarapi vemuno.
Doctor Gwinji vati kunyange hazvo paine varapi vanodarika churu vakanyoreswa neTraditional Medical Practitioners Council, vanoziva kuti munyika mune n’anga nevarapi vakawanda kudarika apa uye mishonga yechivanhu iri kutengeswa pese pese kunyange munzvimbo dzisina kunyoreswa.
Vati zvingave zvakanaka chose kana varapi vese vakadzidziswa kubata mishonga yavo zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasakanganiswa nemishonga iyi sezvinoitika pane dzimwe nguva.
Vati Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kune dzimwe nyika zvikuru sei kunyika dzakaita seIndia neChina idzo dzave kushandisa mishonga yechivanhu zvakanyanya.
Munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association, VaPrince Mutandi Sibanda, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaine ruzivo rwekusimudzira mushonga yechivanhu, havasi kuwana rutsigirwo rwemari kuti vaite izvi.
VaSibanda vati ZINATHA ine nhengo dzakawanda chose zvekuti hazvivanetsi kugadzira mishonga yechivanhu nekubatsira vanhu vese munyika.
Muzvare Juliet Chirenje avo vari kudzidzira zvekurapa nemishonga yechivanhu pachikoro cheZINATHA vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekutsigira vanoshandisa mishonga yechivanhu.
Doctor Gwinji vati pari zvino pave nemasangano gumi nematatu anomiriria varapi vemuno akanyoreswa zviri pamutemo uyewo kune makirinika emishonga yemuno gumi nemana.
Asi vati mishonga iyi yave kutengeswa pese pese, mumigwagwa nedzimwe nzvimbo zvekuti bazi ravo rinoda kuti itengeswe zviri pamutemo pachitevedzwa hurongwa hweMedicines Control Authority of Zimbabwe pamwe ne Medical Research Council of Zimbabwe.